ምሳሌ 5 NASV – Mmebusɛm 5 AKCB | Biblica
ምሳሌ 5 NASV – Mmebusɛm 5 AKCB
Aguamammɔ Ho Kɔkɔbɔ
1Me ba, yɛ aso ma me nyansa;
tie me nhumu nsɛm no yiye,
2sɛnea ɛbɛma woahwɛ yiye,
na wʼano akora nimdeɛ.
3Efisɛ ɔbea aguaman ano sosɔ ɛwo,
na ne kasa yɛ fɔmm sen ngo;
4nanso awiei no, ɛyɛ nwen sen bɔnwoma,
ɛyɛ nam sɛ afoa anofanu.
5Nʼanan kɔ owu mu;
nʼanammɔntutu kɔ ɔda mu tee.
6Onsusuw ɔkwan a ɛkɔ nkwa mu ho;
nʼakwan yɛ kɔntɔnkye, nanso onnim.
7Enti afei, me mma, muntie me;
Monntwe mo ho mmfi nea meka ho.
8Ɔkwan a ɛmmɛn no no na momfa so;
mommmɛn ne fi pon ano,
9anyɛ saa a, mode mo ahoɔden bɛma afoforo
na mode mo mfe ama otirimɔdenfo,
10anyɛ saa a, ahɔho bɛfom mo ahonyade
na mo brɛ de ahonya akɔ afoforo fi.
11Mo nkwanna akyi, mubesi apini,
bere a mo honam ne mo nipadua asa no.
12Na moaka se, “Na mikyi ahohyɛso!
Me koma ampɛ nteɛso!
13Manyɛ osetie amma mʼakyerɛkyerɛfo
na mantie me kwankyerɛfo asɛm.
14Madu ɔsɛe ano
wɔ asafo no nyinaa mu.”
15Nom nsu fi wʼankasa ahina mu,
nsu a ɛteɛ fi wʼankasa abura mu.
16So ɛsɛ sɛ wʼasuti yiri fa mmɔnten so
na wo nsuwa kokɔ ɔman aguabɔbea ana?
17Ma ɛnyɛ wo nko ara de,
a wo ne ahɔho nkyɛ da.
18Nhyira nka wʼasubura
na wʼani nnye wo mmrantebere mu yere ho.
19Ɔte sɛ ɔtwe bere dɔfo, ɔwansan nuonyamfo;
ma ne nufu nsɔ wʼani daa
na ne dɔ nkyekyere wo.
20Me ba, adɛn nti na woma ɔbea aguaman kyekyere wo?
Adɛn nti na woda ɔbarima foforo bi yere kokom?
21Awurade hu onipa akwan nyinaa,
na ɔhwehwɛ ne nyinaa mu.
22Omumɔyɛfo nnebɔne sum no afiri;
na ne bɔne ahama kyekyere no papee.
23Wobewu, esiane ahohyɛso a wonni nti,
na wɔayera, esiane wɔn agyennyentwisɛm nti.
AKCB : Mmebusɛm 5